Iziphuzo ezinhle kakhulu ezihambiselana nesifo sikashukela -
Sibuze usolwazi wezokudla uGenevieve Jardine ukuthi asiphendulele umbuzo ngalombuzo othi iziphi iziphuzo ezihambisana nabanesifo sikashukela Diabetic South Africans: “Indodakazi yami ijova ngomjovo obizwa ngokuthi Insulin kanti ke akakwazi ukujovela zonke iziphuzo akazifunayo. Wonke umuntu uthi isiphuzo aspartame asimlungele, yini ke akangakwazi ukuyiphuza ngaphandle kwamanzi nje vo?” Lombuzo ubuzwa u Di-ann Reid.
Iziphuzo ezihambiselana nabanesifo sikashukela
Ushukela omningi ekudleni esikudlayo usuka eziphuzweni zona ezinoshukela omningi: Lana sikhuluma ngeziphuzo ezehlisa ukushisa, iziphuzo ezinikeza umdlandla, kanye neziphuzo ezisuselwa ezithelweni. Leziphuzo azinawo umthulele ekunyuseni ushukela egazini kuphela, kepha ziphinde zinyuse nomdlandla egazini, lokhu okungaholela ekutheni zibe nomthelela esisindweni somzimba womuntu. Ingakho ke leziphuzo zingezinhle kubantu abanesifo sikashukela
Yini ke enye ongayiphuza?
Iziphuzo ezinoshukela ezenziwe ezihambisana nokudla
Lezi iziphuzo ezingawanyusi amazinga kashukela egazini, kanti ke futhi iningi lazo zine aspartame – lena ke indaba esidingidwe kakhulu osekuyiminyaka manje idingidwa. Noma kuthiwa aspartame iyasolakala ekutheni inyusa amathuba okuba nomdlavuza, ukushintsha umoya wakho, kanye naso isifo sikashukela, akukho osekuqinisikesiwe ukuthi lokhu ngampela iqiniso. Kanti ke nabakwa FDA (Food and Drug Administration) bazivumile iziphuzo zokudla ezine aspartame, kodwa ke kumele zibe nesikalo sokuthi ziphuzwe kanjani. Kuwumbono omuhle ukwehlisa izinga leziphuzo eziphuzwa abantu ezakhiwe zaba noshukela omningi, ikakhulukazi uma uwumuntu ophunga itiye.
Iziphuzo ezakhiwe ngezithelo
Leziphuzo zidida abantu abanesifo sikashukela ngoba ezinye zazo zibhalwe ukuthi aweengeziwe ushukela kuzona ngaphandle ekhasini lazo. Noma ungekho ushukela owengeziwe kuzona, kepha iziphuzo ezakhiwe ngezitshalo zinoshukela omningi lona okuyiwona onganyusa ushukela emzimbeni womuntu ngenxa ye Glucose ephezulu kuzo. Zinoshukela omningi osuka kuzona izithelo ezakhiwe ngawo – uthola wonke ushukela okhona, kodwa awunawo ama “fibre” avumelana nomzimba wakho. Inkomishana nje encane yesiphuzo esakhiwe ngezithelo unoshukela ophindwe kabili ukudlula isithelo leso esakhiwe ngaso leso siphuzo!
Ukucebisa nje: Uma ubheka imbhalo yokudla, qikelela ukuthi uyabheka ukuthi singakanani isikalo sama carbohydrate (ngokwesitsha leso okukalwe ngaso) ungabheki nje kuphela isikalo sikashukela sodwa.
Nantu ke uhlu lweziphuzo ezinoshukela owakhiwe wengezwa kanye nezingenawo.
Iziphuzo -zosuku olulodwa ezinama -carbs amancane, kepha ezinoshukela owengeziwe
Iziphuzo ezihlanzekile (Tab, Coke Light, Coke Zero, Sprite Zero, Fanta Zero etc.)
Ezama cordial okudla (Brookes Low-Cal etc.)
Ezetiye elifakwa namaqhwa (Lipton Iced Tea Lite etc.)
Ezamanzi kodwa ezifakwe izinandisi
Iziphuzo zamihla – Ezinama carbs amancane, kanti futhi azinawo ushukela owengeziwe
Ezika lamula ogxotshiwe wafakwa emanzini abanda mpo!
Ezetiye elishisayo noma elibandayo elinezindandisi (Ezingafakwe shukela othe xaxa).
Amanzi akhazimulayo angafakwe lutho nhlobo.
Izincucu zezitshalo ezifakwe emanzini zacwiliswa kanjalo ngaphandle kokwengeza ushukela, lana sibala (amajingijolo, ulamula kanye nama wolintshi)
Iziphuzo eziphathwayo – zinama carb aphakathi nendawo
Leziphuzo zinama carbonhydrate asuka ku 6 aye ku 8g ngokwesikalo sazo “per serving” – okuphakathi nendawo nesikalo esijwayelekile seziphuzo!
Ucabangani ngaleziphuzo ezihambelana nesifo sikashukela? Sitshele ekhasini lethu Diabetic South Africans!